Ergayga Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Oo Soo Gebagebeeyey Booqashadii Puntland * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boosaaso, Mareeg.com: Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u Qaabilsan Arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa soo gabagebeeyay booqasho seddex maalmood oo uu ku tegay maamul goboleedka Puntland, isaga oo ku hakaday magaalooyinka Garoowe, Galkacyo, iyo Boosaaso, Booqashadasi oo hordhac u aheyd soo xulitaanka xubnaha baarlamaanka oo dhaceysa Bisha December iyo doorashada Madaxweynenimo ee lagu tala galsanyahay in ay ka dhacdo halkaasi 8-da Busha Janaayo ee sanadka 2014.
Danjire Kay, waxa uu la kulmay Madaxwanaha Puntland oo ka mid ah Musharaxiinta Maddaxweyne nimada, iyo musharaxiinta kale ee Madaxtimada u taagan, odday dhaqmeedyada, xubnaha bulshadda rayidka ah, oo ay ku jiraan haweenka.
“Guud ahaan, waxaa la ii sheegay in habka doorashada uu socoto, waxaa kale oo aan la fajacay sida ay qof-waliba uga go’antahy helitaanka doorasho ku dhisan nabad, xorna ah haddana hufan, hase- yeeshee waxaa loo baahanyahay in waxa laga qabto mid ama labo arrimood oo kale si loo helo natiijo qof walba uu ku kalsoonaan karto’, ayuu yiri Kay.
“Oday Dhaqmeedyada, Musharaxiinta, iyo bulshadda rayidka ah dhamaantood waxay soo dhaweeyeen sida uu Madaxwaynaha u doonayo in uu wada tashi guud uu u sameeyo ka hor inta uusan magacaabin guddigga farsamo ee xulitaanka (waa guddiga xalinta khilaafaadka iyo Dib-u heshiisiinta). dadka dhamaantooda waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda uu leeyahay wada tashiga sidan oo kale ah”, ayuu Yiri Kay.
“Dadka intiisa badan ee aan la kulmay oo uu madaxwaynaha ka mid yahay waxay igu raaceen walaaca aan qabo oo ku saabsan tirada aadka u yar ee haweenka ah ee ku jiray baarlamaankii hadda la kala diray. Sidaas darted ergaygu waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay ugu yeraan in ay hal haween ah ka soo gasho markan gobol walba- waa shantii gobol ee asalka aheyd”ayuu yiri Mr Kay.
Sidoo kale, ergaygga waxaa uu warbixin ka dhegeestay Jeneraal Saciid dheere oo mas’uul kanoqonayo arrimaha amniga ee doorashada soo socota. musharaxiintu waxay dhamaantooda muujiyeen kalsoonidda ay ku qabaan hogaaminta suuban ee Jeneraalka iyo sida ay uga go’antahay in uu Musharax kasta wax uga qabto arrimihiisa amniga-si ku haboon.
Ergayga ayaa ugu baaqay dhammaan musharaxiinta, in ay u tartamaan si ay ku dheehantahay mas’uuliyad, kana qayb qaataan sidii doorasho nabadi ku dheehantahay ay u dhici laheyd, waxaa kale oo uu sheegay ergaygga sida ay ‘muhiim u tahay in ay helaan musharaxiinta amni ku haboon- mid walba- marka uu soo galo ama ay soo wada galaan magaaladda Garoowe.”
Danjire Kay, waxaa kale oo uu aad u ifiyay doorka ay leeyihiin warbaahiinta- taas oo ku aadan mas’uuliyadda ka dhalaneysa soo tabinta warka marka loolanka doorashada lagu jiro iyo sida loo doonayo in ay u madax banaanaato warbaahinta.
“Musharax kasta waa in uu warbaahinta u helaa fursad si uu halkaasi uga jeediyo loolankiisa ku aadan doorashada- warbaahintana waxaa ka mid noqoneysa tan ay leedahay dowladda. Wariyayaasha waa in ay madax banaanaadan si ay u soo tabiyaan geedi socodka doorashadda sida ay haddaba u soo tabiyaan oo kale’ ayuu yiri danjire Kay.
Danjire Kay ayaa booqday magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso, wuxuuna sheegay inuu halkaas ku laalaaban doono.